मोटो लाडो नपाएको धेरे भयो - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » मोटो लाडो नपाएको धेरे भयो
मोटो लाडो नपाएको धेरे भयो
गत माघ तिरको कुरा हो । कल आयो ४;३० तिर केटि साथीको , सेलमा उनको नाम देख्ने बितिके लाग्यो आज मेरो नारायणले स्नान गर्न पाउने भयो ।
“ फुर्सद छ ?’
नहुने त कुरै भएन , नभेटको पनि धैरे दिन भएको थियो । दरवारमार्गको एउटा रेस्टुरेन्टमा भेटिने कुरा भयो । यिनि हुन रमि ( काल्पनिक नाम)। मेरो भेट यिनि सँग गजब सित भेट भा थियो केहि वर्ष अगाडि । त्यो बेला बिहे भा थिएन रमिको । उनि सँगको पहिले भेटको पनि लामै सेक्सि कहानि नै छ । कुनै दिन पाठकहरुलाई फेरि सुनाउँला ।
अफिस बाट उनि सिधै रेस्टुरन्टमा आई , आउँदा सधैं बस्ने भित्रको कुना तिर बसेर खाने ठाउँ रोज्यौं । यो कोठामा हामी जस्तो मात्र आएर खाने ठाऊँ हो । त्यो दिन अरुको कोहि थिएन भाग्यवस।
उनि कुना तिर म त्यहि साइडको बाहिर पटि बसें धसिएर । र हात पछाडि लगेँ चाक तिर । जाडो भएकोले थर्मोकोट पनि लागाएकि रहि छ ।
“नचल्नु न। वेटरले देख्छ “ “
वेटर आए हात हताउँला , आज तिमीलाई काँच्चै खाने मन छ । “ अर्को हात छातीमा घुसाएँ,
“कस्तो चिसो हात ?”
“एक छिनमा तातो हुन्छ” वेटर आयो , अर्डर लिएर गयो । पहिले देखि चिनेको ले वेटर ले एकै चोटि सबै अर्डले लिएर गयो , विचमा आउँदा डिष्टर्व हुन्छ होला भनेर होला ।
“हिजो ठोक्यो तिम्रो बुढाले ?” मैले सोधें।
“कहाँ ठोक्नु , बुढोको त्यसमा बिमिरा आएर कति दिन भयो केहि त गर्न पाएको छैन “
“ अनि किन भेट्न नआएको नि ?”
“आएको हैन त यो” यति भनेर टंकि गरि र मैले बहिर बाटै दुध मोलें । मोटो लुगा लगाएकिले उनको निपल ठाडो भयो भएन थाहा भएन तर मेरो सानो सुसु भाई जिफर नै फुटेर बाहिर निस्केला जस्तो गरि कडा र मोटो भई सकेको थियो। बाहिर निस्किन आतुर ।
उनको हात मेरो सानो भाई माथि राखेँ र भने “ सार्है गार्हो भयो के गर्ने? “
“मलाई पनि तिम्रो यो मोटो लाडो नपाएको धेरे भयो तर यहाँ कसरी?”
“ तिमी ट्वाईलेट जानु न म एक छिनमा त्यँहि आउँछु”
पहिले मानिन , अरुले देख्ला भनेर , मैले धेरै कर गरे पछि गइ।
त्यहाँ लेडिज र जेन्स ट्वाईलेट सँगै थियो । उनि गई र म एक छिनमा गएँ , चुक्कुल लगाएकि थिएन्।
झ्याप अँगालो हाल्यौं र किस गर्यौं . हो रहे छ धैरै दिन रमिले लाडो पाएकि रहिन छ , मेरो सानो भाइ झनै कडा र मोटो भयो र कमोढमा को ढकन लगाएर त्यहिँ घोप्टो पारै र उनको जिन्स तल सारि । वाह। क्या राम्रो भ्यु, ऐनामा उनको अनुहार देखियो , सेक्सि , हट, रातो मग मग बास आउने पुतिले लाडोलाई निमन्त्रणा गर्दै थियो ।
“छिटो हाल्नु कोहि आउला? “
“आजलाई होस छिटो हाल्नु प्लिज ”
जिफर खोलेँ , ठुलो मोटो लाडो फुट्ट निकालेँ , र पछाडि बाट हालेँ। भित्र कसिलो थियो , र्याले लागएँ लाडोमा । अनि गयो भित्र।
”कति दिन भयो लोग्ने नपाएको?”
“कुरा हैन छिटो हाल्नु छिटो। “ उनको पुतिमा पानी रसियो र रसले लाडो झनै कडा भयो र स्पिडलाई बढाऐँ।
उफ , उँ उँ कराउन थाली ।
“ठुलो स्वरले नकारउ बाहिर सुन्ला । “
ऐना हेर्दै चिक्केँ र स्पिड बदाएँ ।
“झर्न लाग्यो के गर्ने ?”
“भित्रै झाडि देउ। रस नपाएको धेरै भयो यो मेरी कान्छिले “ ५ ७ मिनेटको बेजोड स्पिड चिकाई पछि मेरो लाडोले फोरा झोड्यो उनको पुति भित्र ।
ट्वाईलेटको लाईन अफ गरेँ , म फुट्ट बाहिर निस्केँ । धन्न कोहि रहेन छ बाहिर ।
chikeko nepali katha, chikeko story, chikeko story nepali, chikna ta kaam garne keti lai po maja aauchha ta, chwaak keti pani chikiyo, dhakka diye, first time sex, lado puti chikeko katha, lado puti katha, lado puti story, puti chikeko katha, puti chuda puti purai bhiji sake ko thiyo, puti purai bhiji sake ko thiyo, मोटो लाडो नपाएको धेरे भयो
dai parne sanga chike maile
कल्पना, म र सेक्स